Kungani usebenzisa i-CRM? Izinzuzo Zokuphathwa Kobudlelwano Namakhasimende
NgoMsombuluko, Februwari 14, 2022 NgoMsombuluko, Februwari 14, 2022 Douglas Karr
Ngikubonile ukusebenzisa okuhle kweCRM emsebenzini wami… nokunye okubi impela. Njenganoma yibuphi ubuchwepheshe, uqinisekisa ukuthi iqembu lakho linjalo isikhathi esincane ukusebenza kuso futhi isikhathi esengeziwe sokunikeza inani ngaso kuyisihluthulelo sokuqaliswa okuhle kweCRM. Ngibone amasistimu e-CRM angafakwanga kahle afriza amaqembu okuthengisa… nama-CRM angasetshenziswanga enza imizamo nabasebenzi abadidekile.
Ngenkathi sonke sibiza isoftware egcina imininingwane yamakhasimende i-CRM, igama ukuphathwa kwamakhasimende kwamakhasimende kufaka phakathi izinqubo namasu kanye nobuchwepheshe. Uhlelo lweCRM lusetshenziselwa ukuqopha, ukuphatha, nokuhlaziya ukuxhumana kwamakhasimende kuyo yonke impilo yekhasimende. Ukuthengisa nokumaketha basebenzisa le datha ukuthuthukisa ubudlelwano futhi, ekugcineni, inani lalelo khasimende ngokugcinwa nokuthengiswa okungeziwe.
Bheka Lapha ukuthola Izibalo Zemboni Yamuva ye-CRM
Ziyini Izinzuzo Zokusebenzisa i-CRM?
Ingabe unethimba lokuthengisa elilawula i-database yabo yokulindela? Ukuphathwa kwe-akhawunti kanye nabamele insizakalo abaphatha amanothi abo mayelana nekhasimende ngalinye? Njengoba inkampani yakho ikhula, abantu bakho bayajika, futhi abantu abaningi ngokwengeziwe badinga ukuxhumana namathemba namakhasimende… uzokulandelela kanjani?
Ngokusebenzisa uhlelo oluphakathi nendawo phakathi kokuthintwa kwamakhasimende ngokuthengisa, ukusekela, nokumaketha, idatha ehlanganisiwe iba lusizo kakhulu enhlanganweni nasendaweni yokugcina imininingwane efinyeleleka kwamanye amapulatifomu. Nazi izindlela eziyishumi lapho izinhlangano zibona ukubuya okuhle ekutshalweni kwazo kweCRM kulezi zinsuku.
Ukubika ekumaketheni, ekuthengiseni, nasekugcinweni kugxile esikhathini sangempela futhi kungahle kubikezelwe kususelwa ekuthengeni uhambo namaphayiphi wokuthengisa.
Ukuhlanganisa kwamanye amapulatifomu wokumaketha okuzenzakalelayo, amapulatifomu we-accounting, amapulatifomu wedatha yamakhasimende, nezinhlelo eziningi zingatholakala.
Ukuzenzekelayo kunganciphisa kokubili umzamo nezinkinga ezibangelwe ukuphusha ngesandla nokudonsa idatha kusuka kusistimu kuye kusistimu.
izinqubo ingaqaliswa lapho kusethwa khona izimbangela ezibalulekile futhi nabasebenzi abafanele baziswa lapho kuthintwa amakhasimende okudingeka kwenziwe.
Ukukhulisa imikhankaso ingenziwa ukusiza ukuqondisa abathengi ngomsele wokuthengisa.
Customer ukwaneliseka nokugcinwa kungakhula njengoba kunesandla esincane esidinga ukwenziwa njengoba umbono we-360-degree yekhasimende ngalinye utholakala kalula.
Amaqembu wokuthengisa kungabhekwa futhi kuqeqeshwe ukusheshisa ukusebenza kwabo. Impendulo evela ekuthengisweni ingahlanganiselwa ukumaketha ukwenza ngcono ikhwalithi nokukhonjwa kokuqukethwe kwabo namasu wokukhangisa.
Marketing imikhankaso ingabhekwa ngokusebenza kwayo nokuthuthuka kokusebenzisa ukwahlukaniswa nokwenziwa komuntu ngokusekelwe kudatha enembile. Njengoba ukuhola kuguqula kumakhasimende, imikhankaso ingabhekiswa kahle ekuthengisweni, inikeze ubuhlakani obengeziwe kumthelela wecebo ngalinye.
Amathuba kungakhonjwa futhi kusetshenzwe ngakho njengoba uhlelo lusetshenziswa ngokuphelele ukuthengisa, ukuthengisa, nokugcina amakhasimende.
Ulwazi kugcinwa mayelana nekhasimende ngalinye ukuze izinguquko kubantu nasezinqubekweni zingaphazamisi umuzwa wekhasimende.
Uma abaphathi be-akhawunti yakho, abamele izinsizakalo zamakhasimende, nabamele ukuthengisa berekhoda ngokunembile ukuxhumana ngakunye nekhasimende ku-CRM yakho, ibhizinisi lakho linesitolo semininingwane esingenakubalwa. Bonke abasebenzi bakho bangavumelaniswa futhi baqonde ngokugcwele inani nomlando wethemba ngalinye noma ikhasimende ngalinye. Futhi, ngokunaka, kungathuthukisa ubudlelwano nalelo khasimende.
Ukuqaliswa okuhle kweCRM kufanele kuvumele ukuhlanganiswa okuncane nokuzenzekelayo, akusizi ngalutho ngaphandle kwebhokisi njengoba izinto zakho zokumaketha zeCRM zingazenza zona.
Uma utshala imali ku-SaaS CRM, lungela ukuthi kube ukuthembela okukhulu ekuthuthukisweni kobuchwepheshe besikhathi esizayo kanye nokwenza isabelomali. Qiniseka ukuthi unohlelo olulinganisela okungabizi, oluhlangana nethoni lamanye amasistimu, futhi ngokuqhubekayo lengeza ezinye izici ngokunikela okukhiqizwayo nokutholakele.
Njenge Umlingani wokuqalisa we-CRM, lapho sibona i-CRM ihlanganiswe ngokuphelele, izenzakalelayo, futhi isetshenziswa, kuncane ukubuya kotshalomali lobuchwepheshe! I-CRM kufanele ibe yisixazululo sokusiza ibhizinisi lakho lisebenze kahle futhi lisebenze, hhayi ngaphansi. Khetha ipulatifomu nozakwethu ukuze uyisebenzise ngokuhlakanipha.
Ukuthengisa Nokumaketha Kudinga Nini I-CRM?
Abantu abaku INetHunt CRM ithuthukise le infographic ngemuva kokuhlaziya indlela yokuziphatha kwamakhasimende abo ngemuva kwalolu bhubhane.
Ngenkathi umjikelezo wokuthengisa we-B2B ungaba isikhathi eside njengezinyanga ezimbalwa, uma ungenzi kahle amathemba akho, angakushiya buthule. Ukutholwa kwamakhasimende kunemvelo eyinkimbinkimbi futhi umnyango wakho wokumaketha ungadinga ukuxhumana okuningi ngaphambi kokuthi ukuhola kukulungele ukuhlola umkhiqizo wakho. Ekugcineni, umsebenzi ohambisanayo wokuthengisa nokumaketha ubalulekile ku-B2B ukuze kuzuzwe ukusebenza kahle kwemali yangempela. Bobabili badinga ubuchwepheshe bebhuloho ukuze babe sendleleni efanayo.
U-Anna Pozniak, i-NetHunt CRM
Amacebiso angu-4 Okuthuthukisa Isu Lakho Le-CRM
Abantu ku I-CrazyEgg sihlanganise le infographic namathiphu amahle ezigabeni ezi-4 zokuhlela Isu lakho le-CRM… Umbono, Hlaziya, Xhuma, kanye nedatha.
Tags: izinzuzo ze-crmcrazyeggCRMi-crm infographicisu le-crmukuphathwa kwamakhasimende kwamakhasimendei-entmnt crmisignaliyini i-crmnini ukutshala imali ku-crmkungani i-crm ibalulekilekungani usebenzisa i-crmkungani usebenzisa i-crm
Izinyathelo Ezinhlanu Ongazithatha Namuhla Zokuthuthukisa Ukuthengisa Kwakho kwe-Amazon